Fahantran’ny ankizy, famakafakana momba ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana 2021 ary fanentanana mifandraika amin’ny tetibola ho an'ny sehatra sosialy eny amin’ny Antenimieram-pirenena
Tamin'ny 16 desambra 2020 tamin'ny 3 ora tolak'andro, ny UNICEF miaraka amin'ny Fiarahan’ny olom-pirenena sy ny fikambanan’olom-pirenena (“Collectif des Citoyens et Organisations Citoyennes”), dia nanao tatitra momba ny toe-draharaha manodidina ny fahantrana marolafy mihantra amin’ny ankizy. Izany dia narahin’ny fanentanana mikasika ny tetibola ho an'ny sehatra sosialy ifotony, anisan'izany ny Fahasalamam-bahoaka, ny Fanabeazam-pirenena, ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana.
Nandritra ny lahateny nataony dia nanantitrantitra ny solontenan'ny UNICEF fa ny ankizy malagasy dia miatrika fanamby mifandraika amin'ny fanabeazana, ny fahasalamana toy ny fanaovana vaksiny ary ny fahazoana rano, fanadiovana sy fidiovana. Ho fanampin'izany dia mbola misedra olana mikasika ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny tsy fahampian'ny fiarovana ihany koa izy ireo. Manana ny fahefana izay tokony hampiasan'izy ireo ny solombavam-bahoaka satria manantena mafy azy ireo ny zaza Malagasy.
Ny UNICEF dia nampiseho ny vokatry ny fanadihadiana momba ny fahantrana marolafy mihantra amin’ny ankizy. Voalaza fa eto Madagasikara, ny 67,6 isan-jaton’ny zaza dia iharan'ny fahantrana marolafy, ka 23,7 isan-jato amin'izy ireo dia lasibatry ny fahantrana lalina. Ny Fiarahan’ny olom-pirenena sy ny fikambanan’olom-pirenena (“Collectif des Citoyens et Organisations Citoyennes”) dia nilaza mazava fa ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana 2021, amin’izao firafiny ankehitriny izao, dia mila fanatsarana ho fanatanterahana ireo torolàlana izay natolotra. Izany no natao dia mba hahafahana manenjika ny fahatarana amin’ny lafin’ny fampandrosoana ara-tsosialy ary manolotra vahaolana amin'ireo olana mianjady amin’ny sehatra sosialy ifotony. Mikasika indrindra ny fanokanana tetibola ho an'ny fanaovam-baksiny dia tokony ampitomboina izany fa tsy ahena (tranga misy mikasika ny tetibola ho an’ny DPEV izay latsaka 64% raha ampitahaina amin'ny LFR 2020) mba hahafahan'ny zaza malagasy misitraka vaksiny. Toe-javatra mampivarahontsana izany satria tsy misy loharanom-bola manokana ampiasaina amin’ny fandaharan’asa fampiasam-bolam-panjakana ho an'ny fanaovana vaksiny. Tsara ny manamarika fa ankizy roa (24-35 volana) amin'ny telo dia tsy vita vaksiny feno ary ankizy roa (12-23 volana) amin'ny telo no tsy misitraka ireo vaksiny fototra: BCG, Polio 3, DTP3, kitrotro. Izany famelabelarana izany dia narahina adihevitra niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka.
Ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena dia nisaotra tamin’ny fandraisan’andraikitra nataon'ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon'antoka ao amin'ny fiarahamonim-pirenena izay mandrisika ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifampizarana miaraka amin’ireo solombavam-bahoaka. Nangataka ireto farany mba ho tanterahina mialoha izany fizarana angom-baovao sy fanentanana izany ary mba ho zaraina ihany koa amin’ireo mambran’ny governemanta amin’ny hoavy.
Politika ara-tsosialy sy ara-ekonomika
19 Martsa 2021
Fanadihadiana haingana momba ny fiantraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena ateraky ny COVID-19 eo amin'ny zavatra iainan’ny ankizy eto Madagasikara (ERISC): Mijaly noho ny vokatry ny valan’aretina ihany koa ny ankizy
Manamafy ny firotsahany an-tsehatra ho an'ny ankizy madinika ny governemanta Malagasy
Fahantran’ny ankizy, famakafakana momba ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana 2021 ary fanentanana mifandraika amin’ny tetibola ho an'ny sehatra sosialy eny amin’ny Antenimieran-doholona
Ainga vao taorian'ny Covid
Ireo tetik’asa fiahiana ara-tsosialy dia tena hita fa fitaovana tsy azo ihodivirana entina manampy ireo ankohonana marefo indrindra nandritry ny krizy COVID